Howlgalo ballaaran oo maanta ka socda Muqdisho iyo wadooyinka qaar oo weli xiran – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Howlgalo ballaaran oo maanta ka socda Muqdisho iyo wadooyinka qaar oo weli xiran
Ciidamada xasillinta ammaanka Muqdisho ayaa howlgalo culus oo baaritaano ah weli ka wada wadooyinka waaweyn iyo isgoysyadda ku yaalla degmooyinka gobolka Banaadir.
Ciidamadaasi oo aad u hubeysan ayaa maanta lagu arkayaa inta badan wadooyinka Muqdisho, halkaas oo ay ka sameeynayaan howlgalo baaaritaano ah oo aad u xoogan, waxayna ku baarayaan gaadiidka iyo dadweynaha la socda.
Gawaari aad u badan ayaa haatan taagan inta u dhaxeeysa isgoysyada KM4 illaa Zoobe ee degmada Hodon, kuwaas oo u diyaarsan inay maraan baaritaanada ay ciidamada xasillinta ammaanka Muqdisho ka wadaan goobahaas.
Dhinaca kale, xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan ugu baaqday laamaha amniga ee dalka inay labo jibaaraan howlgaladda ay ka wadaan degmooyinka gobolka Banaadir.
Howlgalkaan ayaa sii xoogaysay kadib weerarkii ay dagaalyahanadda Al-shabaab dhawaan ku qaadeen Hoteelka Posh Tears iyo maqaayadda Pizza House ee magaalada Muqdisho, waxaana weerarkaasi ku dhimatay ku dhawaad 20 qof, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro kale oo kor u dhaafaysa 30 qof.
Inta badan bisha Ramadaan ayaa waxaa Al-shabaab looga bartay inay weeraro argagaxiso ah ka geystaan qeybaha kala duwan ee dalka, wuxuuna weerarkii dhawaan kusoo beegmay xilli ciidamada xasillinta ammaanka magaalada Muqdisho ay maalmihii ugu dambeysay sii labo jibaareen howlgalada lagu xoojinayo ammaanka caasimadda.